12 mafomu ekugadzira uye nekugovana maGIF needu iPhone | IPhone nhau
12 mafomu ekugadzira uye nekugovana maGIF ne iPhone yedu
Kwechinguva ikozvino maGIF mafaera chave chinotsiva chakanakira kuratidza manzwiro edu panzvimbo pemasikirwo. Parizvino muApp Store tinogona kuwana huwandu hukuru hwezvishandiso zvinotibvumidza kuti tigadzire, titsvage uye tigovane maGIF mafaera neshamwari dzedu nevanozivana navo.
Pano tinokuratidza, 12 mafomu ekugadzira uye nekugovana maGIF zvakananga kubva kune yedu iPhone pasina kuita kune desktop desktop. Dzimwe dzadzo dzinowanikwa mahara kurodha pasi, vane zvekutenga-mukati-app, kunyange zvisiri zvese, kuti vakwanise kugadzirisa mifananidzo yedu usati waigovana.
1 Zvikumbiro zvekugadzira nekugovana maGIF
1.9 GIF Khibhodi
Zvikumbiro zvekugadzira nekugovana maGIF
Uri kunzwa kugadzirwa here? NeGIPHY CAM unogonaWedzera mamwe mafirita kana akakosha mhedzisiro kugadzirisa mifananidzo yako usati wagovana.
GIFO inotipa iri nyore uye inokurumidza nzira yekugadzira animated maGIF, kusanganisira memes kungoshandisa kamera ye iPhone yedu. Kana tangogadzirwa tinogona kuvagovana kuburikidza ne Instagram, Vine, Twitter, Tumblr, iMessage, Whatsapp ...
Iyo ine ye-mukati yekutenga.
GIFO - Yakanyanya GIF Mugadzirivakasununguka
NaJittergram tinogona gadzira 3D animated maGIF kana mifananidzo nekuda kweiyo hyperlapse basa, zvakare inowanikwa mukamera ye iPhone yedu.
vhoto inotibvumidza kushandura mavhidhiyo akanyorwa needu mudziyo kuva maGIF mafaera, pamwe nemifananidzo. vhoto inotibvumidza kurima mifananidzo kana mavhidhiyo ku kukwanisa kugadzira chiuno chakakwana kuigoverana gare gare paTumlr, Instagram, Facebook, Twitter ...
PHHHOTO kuwedzera pakutibvumidza kuti tigadzire maGIF ane hupenyu inotibvumidza kugovana nenharaunda zvisikwa zvedu zvese, uko vashandisi vanosarudza akanakisa. Iyo ine akati wandei modes ekugadzirisa kune ese mushandisi anodikanwa.
Zvirokwazvo zita iri remitambo yeKisimusi ine mbiri nezviso zveshamwari dzako zvinonzwika zvakajairika kwauri. Ichi chishandiso chinotibvumidza isu kugadzira animated maGIF kushandisa chete zviso zveshamwari dzedu kugovana gare gare kuburikidza neTwitter, Facebook, email kana Google +.
GIF GIF GIF iri keyboard iyo inotibvumidza isu kuti titore maGIF mafaera atinogamuchira kuitira gare gare nyore nyore kugovana kuburikidza nekhibhodi mune akasiyana masocial network.
Kuwedzera mhedzisiro kumifananidzo yedu uye mavhidhiyo kuri nyore kwazvo neichi chishandiso. Tinogona kugadzirisa zvatinoita kuchinja opacity, saizi uye kunyange kuwedzera firita kuti uwedzere poindi yekugadzira. Iko kunyorera kunotipa isu anopfuura mazana maviri maadhigidhi ekushandisa kune edu mafoto nemavhidhiyo uye anopfuura makumi masere nemashanu masiki ekugadzirisa mhedzisiro.
Kusiyana nemamwe mafomu, GIF Khibhodi inoregedza isu kuti titore uye gare gare kugovana maGIF mafaera ayo iko iko kunotipa iko iko kunyorera. Iko kunyorera kunotipa mapoka akasiyana kuitira kuti tiwane iyo inonyatsoenderana nezvatinoda zvenguva pfupi.
Ngano inotibvumidza kushandura zvinyorwa kuita zvinoshamisa mifananidzo. Imwe yeanowanikwa mune yekushandisa yakagadzirwa nehunyanzvi maanimator uye ivo vanotipa isu mazana emubatanidzwa wemafonti, mifananidzo, mashure uye mavara ayo ekuyedza nawo.
getGIG ndeye rimwe raibhurari reGIF mafaera izvo zvinotibvumidza kuti titarise nguva dzese ndezvipi zviri kuitika izvozvi kuburikidza nemavara akasiyana atinogona kushandisa pane kushandisa mhando dzakasiyana. Izvo zvakare zvinotibvumidza isu kuwedzera widget kune Notification Center kuti tione kuti ndeipi inonyanya kufarirwa GIF yenguva ino.
Iine matanhatu akasiyana modes modhi, nekutenda kuna Kanvas isu tichava inoyevedza gamba uye isu tichakwanisa kugadzira hunyanzvi maGIF, mavhidhiyo anononoka nguva, mavhidhiyo anononoka kufamba, mifananidzo, Ndinoidhonza yese mumasekondi mashoma. Kana tangoita chimiro chedu tinokwanisa kuchigovana kuburikidza ne Instagram, Tumblr, Twitter, Facebook, YouTube, iMessage uye email.
Parizvino vakawanda vari meseji mameseji ekunyorera anotibvumidza kugovera maGIF mafaera mukutaurirana kwedu, kunze kwemasimba ese WhatsApp, chishandiso chinonyanya kushandiswa pasi rose asi icho chisiri kupa rutsigiro rwemhando idzi dzefaira.
Kunyangwe muApp Store tinokwanisa kuwana nhamba hombe yekushandisa iyo inotibvumidza kuti tigadzire aya marudzi emafaira ari kufamba, kwete ese ari mune urwu runyorwa. Ndeapi mafomu aunoshandisa kugadzira uye kugovana maGIF ako? Titumire isu izvo zvaunoshandisa kugadzira uye ugovane navo pasocial network, mameseji ekunyorera ...
Kune vazhinji vashandisi, kutanga kugadzira maGIF mafaera inogona kunge iri basa rinotyisa kana rakaomarara, kana ivo havana nguva chete. Kunyangwe zvakadaro, kana iwe uchida kugovana aya marudzi emafaira neshamwari dzako, chinhu chakanakisa chaungaite kushandisa mafomu anotibvumidza kutsvaga maGIF mafaera muhuwandu hwakawanda hwemaraibhurari anowanikwa paInternet.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » 12 mafomu ekugadzira uye nekugovana maGIF ne iPhone yedu
WhatsApp neMessage zvinogovera kukanganisa kwekuchengeteka
Pangu anoburitsa yechirungu vhezheni yejereakbreak yeIOS 9.2-9.3.3 asi ...